Dhulgariir - Wikipedia
Dhulgariir waa Dhulka marka oo luxluxmaayo ama uu gariiro, waxaa waaye, marka caleemaha Dhulka, kala durqaayaan. Dhulgariirka khasaarado badan ayoo geestaa, woxoona u badan yahay Qheer kamit ah Asia iyo Ameerika. Dhulgariirka waxee sameesaa fulkaano iyo Buuraha dherdherka.
Soomaaliya dhulgariir culus malahan, laakiin mar marka qaar ayaa waxaa dhulgariir ka dhaco waqooyiga Soomaaliya oo dhan, meelaha buuraha kuyaalo, dhulgariirka soomaaliya badanaa mala dareemo, lakiin waxaa jiro kuwo la dareemaayo oo ka dhaco sida gobolka Awdal. Bishii Maarso 2010 ayaa magaalada Boorama waxaa lagu arkay dhulgariir oo halkaas kadhacay oo khasaaro badan geesanin. Soomaaliya waxee leedahay caleemaha dhulka ama af ingriiska lagu dhaho (tectonic plate), kaas oo lagu magacaabo (somali plate) ee leedahay.
Dhulgariirkii ugu culusaa waxee ka dhacday Badweynta Hindiya 2000. Waxaana ku dhintay in ka badan 180.000, waxeena guryo la aan dhigta sagal boqol kuun oo dad ah. Soomaaliya wee soo gaartay khasaaraha laakinse way ceymatey.
Kitaabka Quduuska wuxuu sharxaa dhacdooyin iyo xaalado tilmaamaya waxyaalaha dhici doona xilliga ka horreeya ‘dhammaadka wakhtiga koonka dunida.’. Kitaabka wuxuu xilligaas ugu wacaa “maalmaha ugu dambeeya”. Sii sheegidda hoos ku qoran waa calaa: Dhulgariirro waaweyn. Mar dhow, Ilaah wuxuu dhulka ka saari doonaa dhammaan sababaha xanuunka iyo silica, oo ay ku jiraan Dhulgariirrada
↑ Maxay Tahay Calaamadda “Maalmaha ugu Dambeeya”?
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhulgariir&oldid=226580"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 17 Diseembar 2021, marka ee eheed 09:00.